Dooda Kharashka Doorashada Mudeysan: Yaa Labeeyey Oo Liibaaney! | Hubaal Media	Home
HUBAALMEDIA.COM Dooda Kharashka Doorashada Mudeysan: Yaa Labeeyey Oo Liibaaney!
Midho ka mid ah heesta Hooyo, Gabyaa M. I. Warsame (Hadraawi). Geedi-socodka dhismaha qaranimada Somaliland waxaa uu soo marey maraaxil kala duwan oo ay taariikh weyn ku duugan tahey rubuc qarniga dhamaadey haddeer. Afar madax-weyne oo xilka hogaamineed iska bedelay midba marxalad waayaheeda gaarka leh ayuu la kulmey. Waa sida u caadada ah dowladnimada dadkeedu leeyahey oo sunne weyn ka ah Jamhuuriyadda Somaliland. Dadka ummada ma huraanka u ah ayaa si weyn, geesino leh, naf-hur leh, oo hagar bax ah ula garab joogey hogaamiye kasta. maal, maskax, iyo muruq intaba oo uga dhignaa saad si joogto loogu habayey si dowladnimadu u hano-qaado. Dadka ummada haldoorka u ah waa ka mideysanaayeen oo isku duubnaayeen oo ula garab joogeen hogaamiyayaashooda taageeradan muga leh mar walba.
“Ninkan aynu duugney maanta kama sheekeyn karo inta waayo aanu mataano ku aheyn oo dowladnimada maanta ku naalooneyno u dib jirney (Waa marxuum C/raxmaan Faarax Sugaal AHUN-Mar. 2011). Dhowr qodob Ayaan ka xusayaa. Markii dowlada cusub Boorama lagu soo dhisey ee guutadii kowaad ee ciidanka Qaranka la sameeyey, oo guutadii labaad la wado, ayaa la go’aansadey in lacagta iyo baaboorka la soo daabaco”. “Saddex bilood rashiinkood oo hore ayaa guutada koowaad loo siiyey loogana amaahdey Ibraahim Cabdi Kaahin (Ibraahim-dheere) AHUN, guutada labaad oo cusbeyd raashinkooda saddex billoodka ah iyo midka guuto koowaad ee saddex biloodka labaad, iyo kharashka daabacaada lacagta iyo baaboorka ayaa loo baahdey”. “Kuye, caawa ma kala tageyneyno…. waa qarxineynaa si lacagtaas loo helo haddii kale waxba kala socon maayaan…… Ina Ibraahim Cigaalna kelidiis waxba ma sameyn karo haddii aan lala dhisin qaranka ayuu igu yidhi marxuumku”.
“Qaad kale ayuu noo direy, cabaar haddii aanu fadhino ayuu igu yidhi Ibraahim Cabdi Kaahin (Ibraahim-dheere) –AHUN- ayeynu odhaneynaa kirada bakhaarada toban sanno noo qadin si kharashaadka loo maareeyo”. “Waxaan ku idhi oo sowtii guutada koowaad raashinkeeda ka amaahaney”. “Waa yeelkeed ayuu yidhi, subaxii xigey ayaanu u tagney Ibraahim-dheere, waa naga aqbaley toban sanno kiradoodii ayuu nasiiyey”. “Subaxii xigey ayaa marxuumku haddana ii sheegey in kharash kale oo hor leh loo baahan yahey; kharashka daabacaada, iyo saddex biloodka labada guuto ee hadda bilaabmey” “Ibraahim-dheere ayaynu ku noqoneynaa kuye”. “Waar ninka sowtii shaley u tagney oo waxaynu weydiisaney inaga aqbaley”. “Oo yaa loo tagayaa ee kale kuye”. Kharashka dhan ee loo baahnaa xilligan waxaa uu ahaa hal malyuun iyo ku dhowaad boqol kun oo doolarka Mareykanka ah. Ganacsato dhowr ah waxbaa laga qaadey balse in ku dhow afar boqol oo kun ayaa dhinaa”.